မြ၀တီ - ပါဠိပထမပြန် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ
ပါဠိပထမပြန် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ
Thursday, 13 June 2019 12:05 font size decrease font size increase font size
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန သာသနာရေးဦးစီးဌာနက ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော ၁၃၈ဝ(၂ဝ၁၉)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန် စာမေးပွဲတွင် သံဃာတော်များ၊ သာသနာ့အနွယ်ဝင် သီလရှင်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြရာ ပထမကြီးတန်းတွင် ဖြေဆိုသူ ၁ဝ၂၃၇ ပါး/ဦးအနက် ၂၈၇၄ ပါး/ဦး အောင်မြင်၍ ၂၈ ဒသမ ဝ၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပထမလတ်တန်းတွင် ဖြေဆိုသူ ၉ဝ၁၄ ပါး/ဦးအနက် ၄၂၈၆ ပါး/ဦး အောင်မြင်၍ ၄၇ ဒသမ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပထမငယ်တန်းတွင် ဖြေဆိုသူ ၁၁၄၄၄ ပါး/ဦးအနက် ၄၅ဝ၂ ပါး/ဦး အောင်မြင်၍ ၃၉ ဒသမ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ အခြေပြု မူလတန်းတွင် ဖြေဆိုသူ ၁၆၂၇ဝ ပါး/ဦး အနက် ၉၅၅ဝ ပါး/ဦး အောင်မြင်၍ ၅၈ ဒသမ ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်ခဲ့ကြသည်။
၁၃၈ဝ ပြည့်နှစ်၊ (၂ဝ၁၉)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန် စာမေးပွဲတွင် အောင်မြင်ကြသော သံဃာတော်များ၊ သာသနာ့အနွယ်ဝင် သီလရှင်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ အနက် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနှင့် သီလရှင် ပထမရရှိခဲ့ကြသော အထူးအောင်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းဖြစ်ကြသည်-
၁၃၈ဝ ပြည့်နှစ် (၂ဝ၁၉) ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများကို နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် သံဃနာယကအဖွဲ့ရုံးများတွင် လည်းကောင်း၊ နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် သာသနာရေးမှူး ရုံးများတွင် လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာ စာဖြေဌာနများရှိ မြို့နယ်သံဃနာယက အဖွဲ့ရုံးများနှင့်မြို့နယ် သာသနာရေးမှူးရုံးများတွင် လည်းကောင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ Website www. mahana.org.mm ၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန Website www. mora gov. mm နှင့် သာသနာရေး ဦးစီးဌာန Website www.dra.gov.mm တို့တွင်လည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း သာသနာရေး ဦးစီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။
Read 246 times Last modified on Thursday, 13 June 2019 12:07
More in this category: « သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရည်(LNG)ဖြင့်လျှပ်စစ်ထုတ်ရန် ဓာတ်ငွေ့ရည် လက်ခံဆိပ်ကမ်းနှင့် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံတို့ကို မကြာမီ ကာလအတွင်း တည်ဆောက်မည် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဖိလစ်ပိုင်လေတပ် ဦးစီးချုပ် Lt. Gen. ROZZANO D BRIGUEZ AFP အား လက်ခံတွေ့ဆုံ »